Waxaa jira siyaabo dhawr ah ee suuqa kala iibsiga ee music ka iPhone iCloud. Ka hor intaadan tegin qaybta, waxaa laga yaabaa in aan soo hordhac gaaban iCloud kuwa akhristayaasha kuwa Halmaansan erayga 'iCloud'.
Waa maxay iCloud?
Back up ka ah iPhone ama iPad Isticmaalka iCloud
Back up gacanta iyada oo iCloud
Si fudud Bedelka music ka iPhone in computer wihtout iCloud ama Lugood
iCloud in adeega kaydinta daruur, kaas oo ka Apple Inc. bilaabay iCloud Taasi waxa ay noqonaysaa ujeeddo ka mid ah oo bixiya adeegyo u isticmaala abuurista gurmad xogta iyo goobaha on qalabka macruufka. Sidaas darteed, waxaan dhihi karaa in iCloud waxaa gurmad oo aanu ku kaydiso music (kale oo aan ahayn music gatay dukaanka Lugood, taas oo laga soo bixi karaa lacag la'aan ah haddii weli laga heli karaa dukaanka).
Your music waa in lagu kaydiyaa maktabadda Lugood aad on your computer. Marka ay jiraan, waxaad uncheck kartaa heeso aad rabto in aad soo saarto ka telefoonka, ka dibna u hagaagsan inuu iyaga ka dhaqaajiyo. Waxaad had iyo jeer dib u hagaagsan karo by rechecking heeso iyo syncing mar kale.
Isticmaalka iCloud, raad raac lagu dhammeystiri karo sida soo socota.
• Tag Settings, ka dibna riix iCloud oo taga si Kaydinta & kaabta.
• Under kaabta, waxaad u baahan tahay in ay soo jeedin ku biiro ee kaabta iCloud
• Ka dibna waxaad u baahan tahay in ay dib ugu mid screen oo shid ama macluumaadka aad u baahan taageeray ka soo xulay
• Ka dibna, hoos u riixdaa jidka oo dhan si ay u Kaydinta iyo kaabta oo ka jaftaa
• Dooro doorashada saddexaad sida ku cad shaashada ka dibna riix Maamul Kaydinta.
• Markaas si naxariis leh loo eego hogaanka, hoosta cinwaanka 'hayaan', oo ay doortaan qalabka aad rabto in aad si ay u maareeyaan
• Ka dib marka laga faaiidaysanayo qalabka, bogga xiga loading qaadataa waqti qaar ka mid ah
• Adiga ayaa ka heli doontaa on page ah oo lagu magacaabo 'Info'
• hoosta cinwaanka Options kaabta, aad arki doonaa liiska shan barnaamijyadooda sare kaydinta-isticmaalayo, iyo button kale reading 'Show All Apps'.
• Hadda, Show-saxaafadeed 'Dhamaan Apps', oo hadda aad dooran kartaa waxyaabaha aad rabto in aad dib u up
• Hadda, xiriiriyaan iPhone ama iPad in a signal Wi-Fi, waxaa furaysto galay il awoodeed oo ka tago shaashadda qufulan. Marka iPhone ama iPad doono si toos ah gurmad maanta ah marka ay la kulanto saddexdan xaaladaha.
Gacanta, waxa kale oo aad ordi karaan gurmad ah in ay iCloud ku xira iPhone ama iPad in a signal Wi-Fi oo markaas ku dhaqmaadka nidaamka.
Habka lagu sharaxay sida soo socota:
• Dooro iCloud
• Dooro Settings
• waxay dooran iCloud ka dibna dooro Kaydinta & kaabta iyo aad samaysay
Wondershare TunesGo waa uun qalab weyn oo loogu ujeedada wareejinta music ka iPhone in computer. Software waxay u adeegtaa sida taageero weyn u ah dadka, kuwa Halmaansan socodka ah ee suuqa kala iibsiga ee music ka iPhone in computer. Qalabkani waxa uu u dhaqmo sida ficil weyn taageerayo dadka.
Habka lagu macnayn karaa sida soo socota: c
• Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo TunesGo Wondershare.
• Ku rakib waxa on your computer ka dibna isticmaali Cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer iyo ordi TunesGo Wondershare
• Laakiin ka hor, kuwaas oo dhan sameeyo, waxaad u baahan tahay in la damiyo syncing si toos ah in Lugood.
• Taas aawadeed waxaad u baahan tahay in aan bilowno aad Lugood Library on your computer. Riix "Edit" oo markaas dooran 'aad rabtid'. In uu furmo suuqa cusub, guji "Qalabka 'tab. Ka dibna waxaad u leeyihiin in ay guji ikhtiyaarka 'hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah'. Ka dib, la xiro Lugood aad. Geedi socodka syncing toos ah la naafo doonaa
• Ka dib socda Wondershare TunesGo waxaad arki doontaa doorasho ah 'si gal' sida ku cad si dhekhso ah.
• Dhammaan aad u baahan tahay waa in ay ku dhufo oo ka dibna sanduuqa wadahadal ah ka muuqan doona oo weydii in aad dooratid gal on your computer si loo badbaadiyo songs, kuwaas oo loogu tala galay in lagu wareejiyo oo aad samaysay habka
• Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hab kale oo ka mid ah hanaanka wareejinta. Riix 'Media' iyo galaan suuqa kala guddi ay gacanta u music. Markaas riix saddexagalka rogay for 'dhoofinta si'. In liiska hoos-hoos u, dooran dhoofinta in My Computer. Waxaad heli doontaa faylasha aad wareejiyo computer ka qalab aad.
. Saasuuna u-socodka oo dhamaystiran, waxaad u baahan tahay oo dhan waa Wondershare TunesGo ah, Your iPhone iyo cable USB oo computer la Lugood rakibay
Haddii aad doonayso inaad wax badan oo ku saabsan wondershare ka TunesGo bartaan, waxaad u baahan tahay in ay soo booqdaan http: //www.wondershare .com / iPhone / iibsiga-music-ka-computer-ka-iphone.html . Waxaad ka heli doontaa faahfaahin ku saabsan habka dhamaystiran oo ku saabsan sida aad ka Computer wareejin karaan music in iphone. Waxaad heli doontaa macluumaad dhamaystiran oo la xiriira geeddi-socodka dhamaystiran oo waxay heli doonaan in ay tani la jecel yahay software.
> Resource > iCloud > Sidee si ay u gudbiyaan music ka iPhone iCloud